နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: ၉၀/၁၀ နိယာမ
wow! good post. Thanks for sharing.
I am also want to read English story.
I am very lazy to read. Teach me how to read and which book is good in start to read.
အခုလို စိတ်ခွန်အားပေးတဲ့ စာကောင်းတွေဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။
ဟုတ်တယ်....၉၀/၁၀ နိယာမကို နားလည်အောင် ကြိုးစားရမယ်... အသုံးနိုင်ရမယ် ဟုတ်တယ်...
ကောင်းလိုက်တာ ကျေးဇူးပဲ ညီမရေ. . . .
ဟုတ်တယ်နော် ခဏတာရဲ့ တုန့်ပြန်မှုမှာပဲ အကျိုးဆက်တွေ များစွာ ဖြစ်ခဲ့ရတာ ကိုယ်တွေ့ တွေပါပဲ။ ပိုပြီး သတိထား ဆင်ခြင်စေမယ့် ပို့စ်ကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါ။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ ဒီလို လိုက်နာစရာကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးအတွက်တကယ်ကျေးဇူးပါ။
ကျေးဇူးပဲဗျာ ဒါမျိုးတွေ မရေးတတ်ပေမယ့် ဖတ်ပြီးတော့ တော်တော်လေးသဘောကျတယ်း)
ဒေါသရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ရလိုက်တဲ့ အမှားတွေက အများကြီးပါဘဲ
တကယ်တမ်းတော့ ဒေါသကို ထိန်းချုပ်လို့ရင် လွယ်လွယ်လေးရယ်..
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်လည်း ဒေါသကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်ခဲနေမိတယ်..
ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ။ အကြိုက်ဆုံး ပိုစ်လေးပါပဲ..
အမရေလာရောက် အားပေးသွားပါတယ် post
လေးကတော်တော် ဗဟုသုတရစေပါတယ် ကျေးဇူးပဲနော်..
ဒီနိယာမလေး တကယ်အသုံးဝင်လောက်တယ်။ ကြိုးစားပြီး ပြုမူနေထိုင်ကြည့်ဦးမယ်။
ဒီပိုစ့်လေးကို သဘောကျတယ် မသိင်္ဂါရေ
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ အစ်မရယ် ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဘာသာပြန်လေးပါ...။
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ အစ်မရယ် .. ကျေးဇူးပါ .. မဖတ်ဘူးသေးပါဘူး ..း)
၉၀/၁၀ နိယာမ အတိုင်းဆို ကိုယ့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အပြုအမူ တွေက အများကြီး ကို ဂရုစိုက် ရမှာနော်..။ အပြင်က လာမှာက ၁၀၊ ကိုယ်ကိုတိုင် ဆုံးဖြတ် ပြုမူရမှာက ၉၀ အများကြီးကို ကွာတာပဲနော်..။